Siyaasi sheegay in Mucaaradka Dowladda banaanbaxyo ka abaabulayaan Muqdisho – XAMAR POST
Xubno ka mid ah Guddiga doorashada madaxabanaan oo tababar ku qaadanaya Uganda
Wasiir ku xigeenka amniga Puntland oo sheegay in warkiisa si qaldan loo fasiray
Somaliya oo safka hore ka gashay waddamada dadkooda xoogga lagu barakiciyay
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ka hadlay Xiriirka Dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka.
Kulanka Golaha shacabka oo maanta looga hadlayo geerida Abwaan Singub
Indonesia oo soo dhaweysay codka Somaliya ay dib ula soo laabatay ee ILO
Muranka Badda ee Somaliya iyo Kenya oo lagu daray ajendaha golaha amaanka ee QM
DF oo ka hadashay doorashada iyo xaaladda siyaasadeed ee Galmudug
Yaa loo magacaabay Agaasime ku xigeenka guud ee Madaxtooyada Qaranka?
Taliyaha guud ee AMISOM oo kulan la qaatay Taliyayaasha Aagga Bariirre
By Zakariye iiman On Apr 17, 2019
Siyaasiga Salaad Cali Jeele oo ah la taliyaha Madaxweyne Farmaajo ee Arimaha Siyaadda oo xalay Warbaahinta kula hadlay muqdisho ayaa waxa uu sheegay in uu jiro banaanbax xoogan oo looga soo horjeedo dowladda kaas oo la qorsheynayo in Muqdisho maalmaha soo socdo uu ka dhaco .
Waxa uu sheegay in banaanbaxa ay qaban qaabinayaan Siyaasiyiinta mucaaradka ah ee dowladda kasoo horjeeda ayna u adeegsanayaan dadka barakacayaasha ah ee kunool Magaalada Muqdisho,isaga oo sheegay in lagu bixinaayo qarashaad farabadan .
Waxa uu tilmaamay in Siyaasiyiinta qaban qaabinaayo banaanbaxa uu qeyb ka yahay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Sanoter Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake kaas oo uu sheegay in lacago uu kasoo qaatay dowladda Imaaraadka Carabta uuna ku doonayo in dowladda iyo Shacabka uu iska horkeeno.
Si kastaba weli dhankooda wax war ah kama soo bixin siyaasiyinta mucaaradka ah ee Siyaasi Salaad Cali jeelle uu ku eedeeyey inay abaabulayaan banaanbax ka dhan ah Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Howlgal laga fuliyey Xaafado ka tirsan Muqdisho
Zakariye iiman Jun 19, 2019
Indonesia oo soo dhaweysay codka Somaliya ay dib ula soo laabatay ee…
Muranka Badda ee Somaliya iyo Kenya oo lagu daray ajendaha golaha…
Soomaaliya oo 33 sanno kadib dib ula soo laabatay codkii ay ku lahayd…
Kabtan ka tirsanaa Ciidanka Uganda oo isku dilay Muqdisho
Yuusuf Dabageed oo diiday in uu xilka wareejiyo
Mareykanka oo sheegay in xubno ka mid ahaa Al-shabaab uu ku dilay Degmada Jilib
Ciidamo ka wada tirsan Somaliland oo ku dagaallamay Hargeysa
Xildhibaan Dhakool oo muddo ka badan bil xirnaa oo lasii daayay
Maamulka Kismaayo oo ka digay Warqado been abuur ah oo…
DEG DEG:Qarax ka dhacay degaanka Bariire ee gobolka Sh/hoose